Vaovao - Moa ve harafesina ihany koa ny vovon'ny vy tsy miova?
Ny harafesin'ny valizy vy tsy misy fangarony koa harafesina?
Inona ny vy vy? Raha ny fahalalan'ny olona maro, ny "vy tsy misy fangarony" dia vy tsy ho harafesina, fa mpanjifa maro kosa no mamokatra teboka harafesina rehefa misy teboka harafesina (teboka) manjelanjelatra eo ambonin'ny valves vy tsy misy fangarony. Inona no antony? Ny valves vy tsy misy fangarony dia manana ny fahaizany manohitra ny fitrandrahana atmosfera - izany hoe tsy misy fangarony, nefa koa manana ny fahaizany mivezivezy ao anaty salantsalany misy asidra, alkaly, sira, izany hoe fanoherana ny harafoana Na izany aza, ny haben'ny fahaizany manohitra harafesina dia miova miaraka amin'ny firafitry ny vy ny vy, ny fanjakana ifanaovana, ny toetoetran'ny fampiasana ary ny karazana mpampita tontolo iainana. Toy ny fantsom-by 304, amin'ny rivo-piainana maina sy madio dia manana fahaiza-manao anti-harafesina tanteraka izy, saingy rehefa afindra amin'ny faritry ny ranomasina izy dia tsy ho ela dia harafesina amin'ny zavona an-dranomasina misy sira betsaka; ary 316 ny fantsom-by dia tsara. Noho izany dia tsy karazana vy tsy misy fangarony izy io, izay mahatohitra ny harafesina sy ny harafesina amin'ny tontolo iainana.
Ny valizy vy tsy misy fangarony dia miorina amin'ny sarimihetsika manify manify, matanjaka, matevina ary miorina amin'ny chromium (sarimihetsika miaro) namboarina teo amboniny mba hisorohana ny fidiranana sy ny fitrandrahana ataoma ôksizenina amin'ny fanohizana ny fahazoana manohitra ny harafesina. Indray mandeha noho ny antony sasany, potika tsy an-kijanona ity horonantsary ity, ny atôma ôksizenina amin'ny rivotra na ranoka dia hitohy hiditra ao na ny vy vy ao anaty vy dia hitohy hisaraka, mamorona oksida vy malemy, ary ho simba foana ny atin'ny vy. Betsaka ny endrika simba amin'ity sarimihetsika ambony ity,
Misy karazany maro ny valves vy tsy misy fangarony izay mahazatra amin'ny fiainana andavanandro:
1. Ny velaran'ny valizy vy tsy manara-penitra dia manangona vovoka na potika vy hafa misy singa vy hafa. Amin'ny rivotra mando, ny condensate eo anelanelan'ny miraiki-po sy ny vy tsy misy fangarony dia mampifandray azy roa ho bateria micro, izay manomboka ny Reaction electrochemistry, simba ny film miaro, antsoina hoe harafesin'ny electrochemical.
2. Ny ranom-boankazo (toy ny melon sy ny legioma, lasopy paty, sputum, sns.) Dia miraikitra amin'ny vovon-tsolika vy. Raha misy rano sy ôksizenina dia mamorona asidra organika izy io ary ny asidra organika dia hanimba ny metaly mandritra ny fotoana maharitra.
3. Ny velaran'ny valizy vy tsy misy fangarony dia misy asidra, alkaly ary sira (toy ny rano alkali sy ny famafazana rano vato amin'ny ravaky ny rindrina), miteraka fahasimbana eo an-toerana.
4. Amin'ny rivotra maloto (toy ny atmosfera misy sulfida, oksida karbonika, ary oksida azotazy), ny rano miangona dia hamorona asidra solifara, asidra azota, ary tondra-tsiranoka asidra acetic, ka mahatonga ny fahasimban'ny simika. Ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo dia mety hiteraka fahasimban'ny sarimihetsika miaro amin'ny vy tsy misy fangarony ary hiteraka harafesina.
Noho izany, mba hahazoana antoka fa mamirapiratra maharitra ny tampon'ny vy ary tsy harafesina, dia ampirisihinay:
1. Ny ambonin'ilay valizy vy tsy haingon-trano dia tsy maintsy diovina ary hosasana matetika mba hanesorana ireo miraikitra sy hanafoanana ireo anton-javatra ivelany izay miteraka fanovana.
2. Ny valizy vy vy 316 dia tokony hampiasaina amin'ny faritra amoron-dranomasina. Ny fitaovana 316 dia afaka manohitra ny fahasimban'ny ranomasina.
3. Ny firafitry ny simika amin'ny fantsom-by tsy misy fangarony eny an-tsena dia tsy afaka mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly mifanaraka aminy, ary tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitaovana 304. Noho izany, hiteraka harafesina ihany koa izany, izay mitaky ny mpampiasa hisafidy tsara ireo vokatra avy amin'ireo mpamokatra malaza. Fiheverana ny fananganana sy ny fananganana Mba hisorohana ny ratra sy ny fametahana ireo loto mandritra ny fanamboarana dia atsangana ny valves vy tsy manara-penitra amin'ny faran'ny sarimihetsika. Na izany aza, miaraka amin'ny fanitarana ny fotoana, ny sisa amin'ny vahaolana apetaka dia mifanaraka amin'ny vanim-potoanan'ny fampiasana ny sarimihetsika. Aorian'ny fanesorana ny horonantsary aorian'ny fananganana azy dia tokony hosasana ny ambony, ary tokony hampiasaina fitaovana vy tsy misy fangarony. Rehefa manadio fitaovana mahazatra amin'ny vy ankapobeny, dia tokony diovina izy io mba hisorohana ny firaiketam-po amin'ny vy. . Tokony hotandremana tsy hamela ny magnetisme manimba tena sy ny vato fanadiovana lafo vidy hifandray amin'ny vy tsy hita noanoa. Raha mifandray izy ireo dia tokony hosasana avy hatrany. Rehefa vita ny fanamboarana dia mampiasa detergent tsy mitongilana sy rano hanasana simenitra, lalitra lavenona, sns.
Raha fintinina, ny valve vy tsy vita amin'ny vy dia tsy ho harafesina tanteraka, ary mbola ho harafesina amin'ny fepetra sasany. Tsy maintsy mametraka, mitazona ary manamboatra valves vy tsy misy fangarony mifanaraka amin'ny fepetra takiana isika ary manandrana mifehy ny fisehoana harafesin'ny valves vy tsy misy fangarony amin'ny fepetra sasany.
Fotoana fandefasana: Mey-02-2020